Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Soar Technology Co., Ltd ကြေးစားတစ်ခုဖြစ်တယ် ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan။ မည်သည့်အရေအတွက်ကကြိုဆိုနေပါတယ်။ ရန်လိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း OEM, နှစ်ဖွဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ။ ခိုင်နောက်ခံအရောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနား BRAND ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ သင်ကြိုးစားဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်။
ပုံစံ - P7-Palladium Alloy Probe Needles
P7-ပယ်လေဒီယမ်သတ္တုစပ်ကိုစမ်းသည့်အခါစမ်းသပ်အသုံးပြုသောမီဒီယာများကိုအသုံးပြုကြသည်.အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်စမ်းသပ်ပြီး pads များအကြားတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ချစ်ပ် circuit ကို၏အရည်အသွေးဆုံးဖြတ်ရန် tester သို့လျှပ်စစ်အချက်ပြထုတ်ပေး.
အဆိုပါ cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ပစ္စည်းနှင့်ဂဟေ pad ၏အဆက်အသွယ်ခုခံ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအောက်မှာ,အပ်၏မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်စမ်းသပ်ပြီးသည့်အခါပစ္စည်း၏ထိတွေ့မှုသည် tungsten needle နှင့် tungsten rhenium needle တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။;beryllium ကြေးနီအပ်သည်အပူချိန်မြင့်နေစဉ်.စွမ်းဆောင်ရည်အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်.
P7-ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းသည်အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားပါသည်,အရာ intermetallic ဒြပ်ပေါင်းများ၏ပျံ့နှံ့ဖွဲ့စည်းရေးတားစီး.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/led-probe.html
သို့: Soar Technology Co., Ltd
ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan